Galmada dadab-dabka ah oo wax badan ku soo kordhisa dareenka dumarka. | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Wasmo Galmada dadab-dabka ah oo wax badan ku soo kordhisa dareenka dumarka.
Galmada dadab-dabka ah oo wax badan ku soo kordhisa dareenka dumarka.
Bulsha:- Hadanews.com oo aad ugu barateen warbixinada arrimaha Bulshada ayaa warbixintan waxaan idiin kugu soo gudbineynaa warbixin xiiso badan oo aan filayo in ay ka faa ideysan doonaan dhammaan aqristayaasha hadanews.com ee daafaha dunida kuwada baahsan.
Sikastaba ha ahaateen Ragow ku dadaala arrintan hadii aad dooneysid qofka aad u galmooto in uusan ku illoobin ,waa talo ay ku siineyso Shibakadda Porno iyo bulsha.com